Thursday 19th of October 2017, 5:46:12 am
धेरै समय पहिले अपराधीलाई यसरी दिइन्थ्यो सजाय, जुन हेर्दा अझै पनि आंङनै सिरिंङ हुन्छ (फोटो सहित)
Friday 13th of October 2017, 01:18 PM
अपराध अनुसारको दण्डसजाय दिने गरेको सबैलाई अवगत नै छ । सानो तिनो अथवा जस्तो सुकै गल्ति होस् उसको गल्ति अनुसारको किसिम किसिमका दण्डसजाय दिने गरिन्छ यो स्वाभाविक पनि हो । आज भोलि पनि गल्ति गर्नेलाई जेल सम्म लाने, फासी दिने यदाकदाका देश मा अझै पनि प्रचलनमै छन् । धेरै समय अघि भने अपराधी र दुश्मनहरुलाई निकै दर्दनाक मृत्युको सजाय दिइन्थ्यो । यी यस्ता तरिका थिए जसको बारेमा जान्दा पनि मुटु काँप्छ । अलग अलग देशमा मृत्युको सजाय पनि फरक फरक थियो । मृत्युदण्डको यो...
वर्षौंपछि उस्तै पोजमा फोटो खिच्दा... (फोटोफिचर)
Friday 13th of October 2017, 08:45 AM
एजेन्सी। हामीमध्ये धेरै पुराना दिनहरु सम्झेर खुसी हुन्छौं । तर केही मानिसहरु फरक सोचाइका हुन्छन् । केही मानिसहरुले आफ्नो पुरानो गेटअप र ठाउँअनुसार पहिलेकै पोजमा फोटो खिचाएका छन् । हेरौं नयाँ समयमा पुरानो पोजमा फोटो खिच्दाको रमाइलो । -डिसि नेपालबाट ...
मध्यरातमा एक जोडीलाई किन समायो गेस्ट हाउस घेरेर प्रहरीले…?
Thursday 12th of October 2017, 08:23 PM
भारत,२६ असोज | एक गेस्ट हाउसबाट एक जोडी श्रीमान् श्रीमतीलाई प्रहरी पक्राउ गरेको छ | प्रहरीलाई देख्न साथ अखिलेश सिंहले फायरिङ सुरु गरेका थिए भने उनकी पत्नीले प्रहरीको पेस्तोल खोस्ने प्रयास गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। अखिलेश सिंह सिंहविरुद्ध आठ व्यक्तिको हत्या, अपहरणजस्ता ५६ मुद्दा दर्ता भएका छन्। २०१५ नोवेम्वर मा जमानत मिलेपछि उनी हरार भएका थिए। गुडगाउँमा भएको खबर पाएपछि प्रहरीले केही दिनसम्म उनको खोजी गरेको थियो। मध्यरातमा प्रहरीले...
खुट्टा गनाएर हैरान हुनुहुन्छ ? यसरी हटाउनुस गन्ध
Thursday 12th of October 2017, 04:42 PM
गर्मी सुरु भएसंगै पसिनाबाट उत्पन्न हुने समस्या बढ्छ । यसको लागी कतिपयले विभिन्न बडी स्प्रे तथा पर्फ्युको प्रयोग गर्दछन् भने कतिले नियमित नुहाउनु, पानी पिउने अनि सन्तुलिन भोजनमा ध्यान दिने गर्दछन् । गर्मीमा देखा पर्ने अर्को एउटा समस्या हो जुत्ताबाट आउने गन्ध । अफिस होस् या घर जुत्ताबाट खुट्टा निकाल्दा वित्तिकै नराम्रो गन्ध आउँन थाल्छ । कतिपय अवस्थामा आफ्नो गन्हाउने जुत्तादेखि आफै लज्जित हुनुपर्ने हुन्छ । खुट्टाबाट आउने त्यस्तो गन्धलाई...
किन राखिन्छ टयाब्लेटको खोलमा खाली ठाउँ ?
Thursday 12th of October 2017, 04:05 PM
हामी सबैले आफ्नो जीवन कालमा औषधि सेवन गरेकै हुन्छौ । हामीले बिमारी हुँदा खाने औषधिको खोल अर्थात् हामीले बिमारी हुँदा खाने गरेको टयाब्लेटको खोलको बीच-बीचमा वा छेउमा खाली हुने गर्दछ ?तपाइलाई थाहानै होला प्राय औषधि संसारभर सप्लाई हुने भएकाले औषधिको खोल अर्थात् ट्याब्लेटको खोलमा कुशनिंग इफ़ेक्ट दिनका लागि खोलमा खाली ठाउँ राखिन्छ । जसको कारण खोल भित्रको ट्याब्लेट टुटफुट नहोस भनेर खाली राखेको पाइन्छ । यस खाली ठाउँका कारण औषधि तुरुन्त खराब...
Thursday 12th of October 2017, 03:58 PM
प्राय संसारका सबै महिला/युवतीहरु ब्रा लगाउने गरेका छन्। तर उनीहरु किन ब्रा लगाउँछन् भन्‍ने कुरा निक्कै रहस्मय भने छैनन्। यी सामान्यता कुराहरु नै छन्।महिलाहरुले ब्रा लगाउँदा उनीहरुलाई ईरबाट निस्कदाँ आफूलाई कम्फर्टेबल हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ।तर उनीहरुले ब्रा खोल्‍ने बित्तिक्कै पनि त्यस्तै खुल्ला अनि स्वतन्त्र अनुभूति गर्ने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ। घरभित्र बस्दा ब्रा खोलेर हिड्न, कुद्‍न र नाच्न महिलाहरुलाई बढी सजिलो हुन्छ भने...
युवतीको अमानवीय तरिकाले योनी सिलाउनेदेखि स्तनमा आइरनसम्म गरिन्छ
Thursday 12th of October 2017, 02:35 PM
हेटौँडा, २६ असोज, पृथ्वीमा विभिन्न किसिमका मानिसहरु बसोबास गर्छन। जसको परम्परा र सभ्यता पनि फरक फरक हुन्छ । ती मध्ये कतिपय स्थानमा युवतीहरुलाई जनावरको जस्तो व्यवहार गरिन्छ। आज हामी तपाइँहरुलाईa केही यस्ता परम्पराका विषयमा जानकारी दिँदैछौं जहाँ युवतीहरुलाई अमानवीय तरिकाले यातना दिइन्छ। पूर्वी अफ्रिकामा यस्तो जाति छ, जसले छोरी मान्छेको योनी सिलाइ दिन्छन्। छोरी मान्छेले विवाह अगाडि यौन सम्पर्क नगरुन भनेर उनीहरुको योनी सिलाइन्छ। यसरी योनी...
मृत्युपछि शरीरका अंगहरु चल्छन् ! शवको प्रक्रियाबारे जान्नैपर्ने कुरा
Wednesday 11th of October 2017, 08:46 PM
रासस: चितवन, असोज २५ । मृत्युपछि शवको प्रक्रियाबारे आवश्यक ज्ञान नहुँदा वेलावखतमा चिकित्सकमाथि दुव्र्यवहार हुने र अस्पतालमा तोडफोड हुने गरेका छन् । चिकित्सकले मृत घोषणा गरिसकेपछि पनि मृतकका विभिन्न अंग चलेको भन्दै ठाउँठाउँमा चिकित्सकमाथि दुव्र्यवहार र अस्पताल तोडफोड हुने गरेका छन् ।मृत्यु भइसकेपछि पनि शरीरका अंग तन्किने र खुम्चिने हुँदा चलेको जस्तो भ्रम हुने गरेको चिकित्सक बताउँछन् ।यसको ज्ञान सर्वसाधारणलाई नहुँदा समय समयमा...
जानी राखौ १ मिन्स भएको कति दिन पछि गर्भ बस्छ रु हेर्नुहोस गर्भ रहे नरहेको थाहा पाउने तरिका
Wednesday 11th of October 2017, 04:45 PM
पुरुषबाट निस्कने शुक्रकीट र स्त्रीमा विकसित भएका डिम्बको मिलनबाट हुन्छ। यौनसम्पर्कका बेला पुरुषको वीर्यस्लखलन हुँदा निस्किएका करोडौं शुक्रकीट मध्ये केही पाठेघरको मुख हुँदै पाठेघर र त्यसपछि डिम्बबाहिनी नलीसम्म पुग्छन्। त्यहाँ परिपक्व भएको डिम्ब (९अण्डा) सँग असंख्य शुक्रकीटमध्ये एकको मात्र मिलन हुन्छ। यसरी मिलन हुने प्रक्रियालाई निषेचन भनिन्छ। यसरी शुक्रकीट र डिम्बको मिलन भएको कोषलाई युग्मज भनिन्छ र यही नै पछि विकसित भएर शिशु वा बच्चा बन्छ।...